Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Gcina Ookrebe Bethu
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba Eziphambili zaseThailand
iyaqhubeka nokuqhubela phambili i-ajenda yolondolozo lwaselwandle ngokusungulwa kwentsebenziswano entsha ebalulekileyo kunye nePhuket Marine Biological Centre (PMBC) ukuzala, ukukhathalela kunye nokukhulula i-bamboo sharks kumazantsi eThailand.
UDirk De Cuyper, iGosa eliLawulayo le-S Hotels & Resorts, uthe: “Siyazingca ngokudibana nePhuket Marine Biological Centre kule projekthi ibalulekileyo. I-Bamboo sharks ihlelwa 'njengabasesichengeni' yiManyano yaMazwe ngaMazwe yoLondolozo lweNdalo (IUCN), ngoko ke inkqubo ye-SOS iyakudlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni uhlobo lwelitye elingundoqo. Oku kuyinxalenye yesibhambathiso senkampani yethu kwiplanethi yethu, ekhokelwa yinkxaso yethu kwiiNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo zeZizwe eziManyeneyo (SDGs), ngakumbi i-SDG14, 'Ubomi obungaphantsi kwamanzi', obugxile kwiilwandle, iilwandle kunye nemilambo yehlabathi.
“Amaziko ethu oFundo lwaseLwandle eSAii Phi Phi Island Village naseSAii Lagoon Maldives adlala indima ebalulekileyo ekulondolozweni kwenkqubo yawo yendalo engaphantsi kwamanzi nasekukhuseleni izilwanyana zasendle. Bekhokelwa ngabahlali baselwandle bezazi ngebhayoloji, bakwafundisa iindwendwe zethu kunye nabahlali bengingqi kwindawo esihlala kuzo ngokubaluleka kolondolozo. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nabahlobo bethu kunye noogxa bethu kwi-PMBC ukuze sisindise i-bamboo sharks zaseThailand,” wongeze watsho uMnu. De Cuyper.
UGqr Kongkiat Kittiwatanawong, uMlawuli wePhuket Marine Biological Centre, uthe: “Iziko lethu lithembele kumandla nobuchule beSingha Estate ngokumalunga nolondolozo lwendalo yaselwandle ngokuqwalasela amava enkampani kwiiprojekthi ezidlulileyo. Ngaphandle koko, inkampani iqeshe izazinzulu ezininzi zaselwandle kunye nabasebenzi baseMarine Discovery Centre, abanobuchule bokukhathalela amaqanda e-bamboo shark de babe ngabantwana.
I-S Hotels & Resorts kunye ne-Singa Estate ziye zasebenzisana kumaphulo amaninzi ayimpumelelo olondolozo lwaselwandle. Iprojekthi ethi "Phi Phi Is Changing" ijolise ekusombululeni umba we-coral bleaching, ngelixa i-"Toh Wai Wai" inceda ukukhulula i-clownfish, ukusabalalisa i-coral kunye nokutshala imithi ye-mangrove kwi-Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park. Ukongeza, intsebenziswano entsha kunye neYunivesithi yaseKasetsart isebenzisa iidrones ukubeka iliso kunye nokufota iingqaqa zekorale kwindawo leyo. Ekuqaleni kwalo nyaka, i-Marine Discovery Centre e-SAii Phi Phi Island Village yahlangula kwaye yahlaziya i-bamboo shark eyanzakeleyo kunye ne-lionfish.
KwiiMaldives, iinzame zokusasaza iikorale liqela leMarine Discovery Centre eSAii Lagoon Maldives kukhokelele ekwandiseni ngokuphindwe kalishumi ulwalwa lwasekhaya, kunye nokubuyiswa kwamafudo olwandle ohlobo lwe-hawksbill, i-hammerhead sharks kunye ne-bottlenose wedgefish kwindawo. Ufudo lwaselwandle olukhulelweyo lwe-Olive Ridley lwafunyanwa luhlala elunxwemeni ngo-2020-indawo yokuqala erekhodiweyo yokubonwa kolu didi luhlala kwiiMaldives.
I-S Hotels & Resorts izibophelele ekupheliseni ukusetyenziswa kweplastiki enye kuphela, ukunciphisa inkunkuma, ukusetyenzwa ngokutsha kwamanzi kunye nokulwela ukusetyenziswa kweemveliso ezizinzileyo kunye ne-biodegradable. Ngamanyathelo amaninzi aqhubekayo, ayimangalisi into yokuba iqela liphumelele iimbasa ezininzi, kuquka newonga elithi "Green Leadership" kwiAsia Responsible Enterprise Awards 2020. I-SAii Phi Phi Island Village yayiphumelele "Marine & Nature" kwiGunyabantu lezoKhenketho. yaseThailand (TAT) UK Responsible Thailand Awards 2020, ngelixa iSantiburi Koh Samui yawongwa ngembasa yeHotele ka2020 – 2021 yeGreen Hotel “iNqanaba leGolide” – ekuphela kweholide eSamui ukuphumeza eli nqanaba kwiipropati ezingaphezu kwe-100 eziye zafaka isicelo.